Blaogin'i tebokaefatra | Ankapobeny
22 Desambra, 2008 14:46
Taratasy misokatra ho an' i Andry Rajoelina
Nampidirin'i tebokaefatra, Sokajy [	Ankapobeny ]
[ (24) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Ny Alahady 21 Desambra 2008 no nandefasako ity taratasy ity ho an'i Ben'ny Tanàna Andry Rajoelina ka omeko ho vakianareo namana ihany koa.
Miarahaba anao Atoa Ben'ny Tanàna
"Disadisa", "savorovoro" izay no azoko ilazana ny zava-misy eto Antananarivo Renivohitra amintsika miteny izao.
Efa hita sy re ny teny nataonao amin'izay ambarana fa "tsy rariny" sy "didy jadona" atao aminao sy ny mpiara-miasa aminao amin'ny fitantanana ity Renivohitra malalantsika ity. Mino aho fa ren'ny mpitondra fanjakana isan-tokony ireny na tsy "mamaly" aza izy. Efa vita ny anjaranao!
Ny hevitro, ary atolotro am-pitiavana ho anao dia ity. Aza avela ho raraka an-tany ny fitokisana napetrakay taminao mba hahatanteraka ny programa izay efa nambaranao. Izany hoe "mandefera" amin'ny endri-javatra toa izao na dia misy tsy rariny aza fa tsy tiako raha PDS no hasolo anao. Olona notezaina tamin'ny fivavahana ianao ka araho izany.
I Tes 5:
14. Ary mananatra anareo izahay, ry rahalahy; anaro izay tsy mitoetra tsara; omeo toky ny malemy saina; ampaherezo ny reraka; mandefera amin'ny olona rehetra.
15. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona; fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra.
Manao veloma anao amin'ny anaran'ny Tompo.
14 Desambra, 2008 15:40
[ (5) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Endriky ny serasera ankehitriny ny internet. Efa ela izaho no naniry ny mba hananan'ny Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) izany ary hinoako fa andalana izany. Ny adiresy e-mail aloha izao no efa nampahafantarina ka zaraiko aminareo namana rehetra eto.
Natao ho fampandraisana anjara ny rehetra mba ho fampandrosoana ny tànana izao satria mbola maro ny fanatsarana tokony hatao amin'ny renivohitry Madagasikara raha tsy hiteny afatsy ny loto, ny mpivarotra tsy manara-dàlana sns.
"Entan-jaraina tokoa mora zaka ary ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona".
Fa araka ny hevitry ny CUA dia hisy lohahevitra isam-bolana ho valian'izay manan-kevitra mikasika ny sosialy, ekonomika, politika, tontolo iainana, koltoraly, fialam-boly, fanatanjahan-tena. Amin'ity volana Desambra 2008 ity dia mikasika ny "fomba fintantanana ny vola fitia tsy mba hetra hangonina hamitana ny Lapan'ny tànana" no resaka. Manomboka ny volana Septambra 2009 io fitia tsy mba hetra io.
Manorata "tsara" ary fa tànanantsika no hasoavina.
28 Aogositra, 2008 12:31
Iza moa ?
Tsy hanoratra lahatsoratra aho fa hanontany hoe iza moa ilay namana nandefa lahatsoratra miaraka amin'ny sary "ny fivoaran'ny olombelona" iny. Mba ilaiko fa ampio kely izaho fa tsy tadidiko. Merci daholo
22 Aogositra, 2008 13:11
Sao dia sangy mihoatra ny loha kosa e
Araka ny fanampahan-kevitry ny Ministeran'ny Vola eto amintsika dia giazana tsy omena ny Commune Urbaine Antananarivo izay fantatsika rehetra fa tantanan'Atoa Andry Rajoelina ny volan'ny commune izay mitentina
880 millions Ar. Antony nambara dia hanefana ny trosan'ny "Fivondronam-pokotany Antananarivo Renivohitra" hatramin'ny taona 1980.
Drayyyy le retsy aaaa!! Sao tonga amin'ny tenin'ny Ben'ny Tànana matetika hoe "famingampinganana" atao aminy izao fanapahan-kevitra izao.
Marina fa ny trosa "nolovaina" dia tsy maintsy hefaina fa mba atao araka izay zakan'ny ho enti-manana araka ilay fitenintsika Malagasy hoe: "Atao tery omby ririnina, tsy hamono ny reniny no tsy hahafaty ny zanany". Izay moa ilay fiteny ??!!
Tsy hanontany aho hoe: ary ireo Ben'ny tànana teo aloha rehetra ve mba nanefa ny trosany.???
Tsinjovy ihany ry zalahy manampahefana isany ny "fampandrosoana" fa tsy "famonoana" aaa
18 Aogositra, 2008 12:28
[ (3) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
« Soabika »
Fandaharana iray ao amin’ny TV Plus Madagascar miresaka fampahiazan-tena.
Voasokajy ao anatin’itony atao hoe « Téléréalité » itony ity fandaharana « Soabika » ity.
Fifaninana eo amin’ireo vehivahy miisa 11 nahazo vatana izy io.
Natao ny Asabotsy 16 Aogositra 2008 teo ny « escale » faharoa izay hitsarana ny ezaka vitan’ny tsirairay sy hijerena izay mpifaninana be mpifidy ka mbola hijanona ao amin’ny « Château ».
Raha ampitahaina ny « escale » voalohany sy faharoa dia tsaratsara kokoa ity farany. Na teo amin’ny sary (mivantana), na ny hazavana (jiro)... Fa na izany aza mbola lava loatra (ora efatra latsaka kely ) ka mankaleo sy mampatory ny mpijery na ny tao amin’ny “gymnage” Akorondrano na ny tany an-trano.. Tsy mba ireny fandaharana fohifohy mampilendalenda ireny.
Fa izay tena nanesika ahy hanoratra ho anareo momba ity fandaharana ity dia izao ambarako anareo izao. Asa aloha raha mba nisy nanaraka ity fandaharana ity ianareo na dia izaho irery no nijery. Ahoana marina ireny “fepetra” niova tampoka ireny. Nolazaina fa hisy iray mody amin’ity “escale” faharoa ity dia izay mahazo naoty kely indrindra na ny “sms” azony na ny naoty omen’ireo "mpanazatra". Nambara tokoa ny mpifaninana mody nefa nolazaina indray fa “noho ny feon’ny mpijery” dia mbola mijanona ao amin’ny “Chateau” indray sy ny fitenenana hoe “mbola kely loatra ny 15 andro hitsarana azy ireo”.
Oadray re olona oooo. Fa iza no nanao ny fepetra no miova tampoka toa izany. “Tsy matotra” hoy ny fitenin’ny tanora ankehitriny.
Nambaran’ny mpikarakara koa (Tv Plus) fa izato nomerao izato no nahazo ny “fanomezana” ho an’ireo nandefa sms. Tsy naheno na nahita aho raha nijery io fandaharana io ka nisy ny solotenam-panjakana (Ohatra: police des jeux) nanamarina ny nahazo loka tamin’ny sms na ny vokatra azon’ny mpifaninana. Ny fahamarinana indray no tiako havoitra amin’ity fanamarihana faharoa ity.
Ekeko fa tsara ilay fandaharana satria tsy mbola nisy nanao tokoa tamin’ireo fahitalavitra Malagasy fa raha hanao ihany dia manaova ny tena “matotra”.
Lesona omen’ny tantara